Dziviriro yemasiki Vagadziri uye Vatengesi - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Anodzivirira maski anoshandiswa kuchengetedza kumeso uye mutsipa kubva kubhururuka simbi tsvina, magasi anokuvadza, mvura splashes, simbi uye yakakwirira-kupisa solvent solvent flying kukuvara. Iko kunonyanya kuve neanogadzira masks, anti-athari masks, anti-radiation masks, anti-utsi gasi masks uye masiki ekupisa-kupisa.
Iyo mask yekudzivirira yekurapa inogona kudzivirira zvinobudirira vashandi vekurapa kubva pakutsvaira tsvina pachiso panguva yekubvunzana uye kurapwa. Panguva imwecheteyo, iyo mask yekudzivirira yekurapa ine yakanaka anti-fog basa uye inopa chiratidzo chakajeka chekurapa. Iyo yekudzivirira yekurapa kumeso mask inosanganiswa neyekudzivirira pepa, chipanje uye elastic bhendi, uye fomu yemhando inoumbwa neyekudzivirira pepa, furemu uye inodzivirira-kudonha kwezeve hove. Iyo yekudzivirira yekurapa kumeso mask inonyatso shandiswa muzvirwere zvekurapa zvinoda kuchengetedza kumeso kweanoshanda.
Iyo yekudzivirira yekurapa maski inoumbwa nezvikamu zvitatu: rakapetana-rwakatemerwa anti-fog pachena dziviriro pepa, furemu (kana elastic bhendi, musoro-wakaiswa mask) uye anti-off chipanje; iyo anti-fog maski inogona kudzivirira zvinobudirira vashandi vekurapa kuti vagamuchire kubvunzana uye kurapwa Iyo yakasviba inoputika pachiso panguva yekutarisa, uye ine yakanaka yekudzivirira fog basa, iyo inopa pachena yakajeka kurapwa. , Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya mune zvekurapa zvinoda kuchengetedzwa kwechiso chemushandi. Ichi chigadzirwa chinongoshandiswa sechiwande chevashandi vekurapa kusvibisa munhu anoshanda. Izvo zvakanyatsorambidzwa kushandisa chigadzirwa ichi kutsiva michina yekudzivirira yakadai semabhakitiriya uye zvimwe chirwere chinotapukira. .
Iyo anti-fog maski inogona kudzivirira zvinobudirira vashandi vekurapa kubva pakutsvaira tsvina pachiso panguva yekubvunzana uye kurapwa. Iyo chigadzirwa inewo yakanaka anti-fog basa uye inopa yakajeka chiratidzo kurapwa.
Anti-fog kumeso masks anoshandiswa zvakanyanya mune zvekurapa zvinoda kuchengetedzwa kwechiso chemushandisi, kunyanya mabasa ekurapa.
Dziviriro yemasiki ekudzivirira: ngowani
Inodzivirira mask chimiro: cap muviri, gomba rekugadzirisa, pachena
Kudzivirirwa kwemaski ekudzivirira: chengetedza maziso uye kumeso, kudzivirira kupararira kweasasi gasi
Basa remasiki ekudzivirira ekudzivirira: kudzivirira kupararira kwemasoso, madonhwe, uye hutachiona
Anti-pfira maski, kubuda pachena, yakakura nzvimbo yekudzivirira, mutengo wakaderera, wakadzokorora kushandiswa. Yakanyanya kukodzera kushandiswa munzvimbo dzine traffic hombe, semuenzaniso, mumafekitori mahopu, mahofisi, zviteshi, zviteshi, mabhazi, hypermarkets, masupamaketi, nezvimwewo, kupfeka sutu yekudzivirira yekudzivirira kunogona kuzvidzivirira iwe nevamwe.
Mukugadzirwa kwemaindasitiri, zviso zvevanhu zvinowanzokuvadzwa nehupamhi hwekumhanya, simbi dzakanyungudutswa, makemikari emvura zvinonhuhwirira, uye mwenje unokuvadza, uye masks ekudzivirira akasiyana siyana anofanirwa kushandiswa kuchengetedzwa.
Kune mhando dzakawanda dze masks ekudzivirira, asi anogona kupatsanurwa kuita mana mana zvichienderana nekushandisa kwavo: mas anti-kukanganisa masiki, anti-corrosive fluid splash masks, guruva, chiutsi uye akasiyana etyisi gasi masks, uye radiation Shongai hwindo rekutarisa .
Munguva yekushandisa, iyo mask yekudzivirira inofanirwa kuve yakachena, yakajeka, uye isina kusukwa kubva kumarara uye makaki. Kubatana pakati pe mask kana ngowani rack inofanira kusimba. Matambo eheti yetani anofanira kunge akakodzera kugadziridzwa, kuitira kuti isungirwe zvakanaka, isina ngozi uye yakasununguka kupfeka mumusoro. Iyo butter butter nati inofanirwa kunge iine basa rakanaka uye inogona kugadzirisa iyo mask iri munzvimbo yakakodzera kutarisa.
1. Cap muviri
Muviri wemupendero uri pamberi payo uye une bharanzi rakapamhama.
2. Kugadzirisa gomba
Iko hakuna maburi ekugadzirisa pamativi ese emutumbi we cap, uye mazino anotenderera anopiwa parutivi rwegomba remakomba ekugadzirira.
(1) Musoro wedenderedzwa
Mhete yemusoro iri pakati, inoita basa rekunyaradza musoro.
(2) Kugadziridza chidimbu
Kupera kwechinhu chinogadziriswa kunopihwa nechikamu chinobhowa chinogona kukombama kumberi, chikamu chinokamhina chakapihwa pekutanga, uye girini inoenderana neye protrusion inopihwa pane yekugadziridza chinhu.
(3) Nzeve muffs
Iyo munzeve yakarongedzwa kune iyo rutsigiro rwemukati, uye chute inopiwa pamucheto wepamusoro wezevemuff, uye nzvimbo inowanikwa inowanikwa pane chute.
Iyo inoumbwa newindo rekutarisa, firita, pepa rekudzivirira uye maski echiso, etc. Iyo ine anti-spatter, kukuvadza mwenje uye kupisa kupisa kuita. Kune mhando dzakawanda dzemusoro-dzakasimudzwa, ruoko rwakabata ruoko, hafu-masiki, uye yakazara kumeso kwechiso masokisi mapikicha 'akakodzera kune yekushandisa waya nehezheni inodziya.
Iyo inoshandiswa kuchengetedza kukanganiswa kwezvinhu zvinobhururuka, makemikari emvura zvimedu, nezvimwewo, uye anoshandiswa zvakanyanya mukuitwa sekutendeuka, chigayo, kuronga, kusaga uye kudonhedza matombo.
3. Kupisa-chiratidzo uye radiation mask
Iyo inoumbwa nemasiki uye bvudzi romusoro. Zvinowanzoshandiswa ndehwe nhoo dzekupisa nesimbi mesh uye kukwiridzira, iyo inoshandiswa kazhinji mukunyungudira, chira uye kupisa kwakanyanya kuita.
â `£ Paunenge uchishanda neye yekuvirisa masiki, kuitira kuti kudzivirira kusava nekukuvadza muviri, usarega kuishandisa pakati.
âœ¤ Paunenge uchishandisa masks asina kupisa moto uye masutu anodziya kupisa, iwe unofanirwa kuona kuti pane here kukuvara, uye kana zvirizvo, zvinofanirwa kushandiswa pamwe chete nemagirazi asina magetsi.